ကလိုစေးထူး: What's up mannnnnnnnn....
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လကျော်ခန့်က ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဏ်ကိုသွားဖို့ ဘတ်စ်ကားစောင့်နေတုန်း ကားတစီးက အနားမှာ ထိုးရပ်လာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ မြန်မာ အသိတယောက် ဖြစ်နေပါတယ်။ သူက-
`အကို၊ ဘယ်သွားမလို့လဲ၊ ကျနော်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ´
သူ့ကားပေါ် လှမ်းတက်လိုက်တော့ ကားထဲမှာ အဲဒီကောင်လေးနဲ့ အတူ တခြား မြန်မာတယောက် ပါလာသေးတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဆံပင်က ရှည်ရှည်နဲ့ ဟောင်ကောင်မင်းသားလိုလို အဲဒီလူက ကျနော့်ကို `Hey, What’s up´ လို့ လှမ်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီနိုင်ငံရောက် မြန်မာအချင်းချင်း လူချင်းတွေ့ရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို လှမ်းနှုတ်ဆက်တာ အထူးအဆန်း ကိစ္စတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အနှီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ အတန်ငယ် ထူးခြားပါတယ်။ သူ့ထူးခြားမှုကတော့ သူက ကျနော့်ကို အင်္ဂလိပ်လိုချည်း ပြောနေတာပါ။ ရှုပါ။
How is going, man?
`ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီလိုပါပဲ၊ အဆင်ပြေပါတယ်´
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှလည်း ကျနော့်ကို အင်္ဂလိပ်လိုတွေချည်း ဟိုမေးဒီမေး၊ ဟိုပြော ဒီပြောပေါ့။ သူက အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက် ကျနော်က မြန်မာလို ဖြေလိုက်နဲ့။ ကျနော်က မြန်မာလို တမင်သက်သက် ပြန်ဖြေနေတာကိုလည်း သူ ရိပ်စားမိပုံမရပါဘူး။ မြန်မာအချင်းချင်း (မလိုအပ်ဘဲ) အင်္ဂလိပ်လို ပြောနေတာကို စိတ်ထဲမှာလည်း ကျလိကျလိ ဖြစ်လွန်းလှပါတယ်။ အဲဒီလူကားပေါ်က ဆင်းသွားတော့ ကားမောင်းသူ လူငယ်က ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။
`ဒီလိုပဲ အကိုရ၊ သူက အဲဒီအတိုင်းပဲ´
တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားဟာ ကမ္ဘာသုံး ဘာသာစကား တခုဖြစ်နေတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ ဒါဟာ လိုအပ်ချက်တခု ဆိုတာ နားလည်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် အထက်ပါ အနေအထားမှာ မြန်မာအချင်းချင်း အကြားမှာတောင် အင်္ဂလိပ်လို ပြောမှ ဖြစ်တော့မတဲ့လား။ ကျနော် မတွေးတတ်တော့ပါ။
နောက်ထပ် တခု သတိထားမိတာ ရှိပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားကို ပီသစွာနဲ့ တဖက်သား နားလည်အောင် ရိုးရှင်းစွာ ပြောဖို့ ဦးစွာ မကြိုးစားဘဲ ဒေသခံတွေရဲ့ လေသံအတိုင်း အတင်းလုပ်ယူ လုံးထွေးထွေးလေသံတွေနဲ့ ပြောတတ်ကြတာတွေပါ။ အဲဒီလိုပြောတော့ တဖက်က နားထောင်သူက သူဘာတွေပြောနေမှန်း တကယ်ကို နားမလည်တော့ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ပြောရ၊ အလုပ်မဖြစ်လှပါဘူး။
အဲဒါမျိုးက ကျနော်တို့ မြန်မာတွေချည်းသာ မကပါဘူး။ တခြား နိုင်ငံတွေက လူတချို့တွေလည်း ပီအောင်ထက် အမေရိကန်သံ ၀ဲအောင်လုပ်ပြောတာကို နားထောင်ရဖူးပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ လုပ်ပြောပြော သူတို့မူရင်း ဒေသအသံက ၀ဲနေတာပါပဲ။ ကြာလာတော့ လူတယောက်ကို တွေ့ရင် သူပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားရဲ့ လေယူလေသိမ်းကို နားထောင်ပြီး သူဟာ ဘယ်ဒေသက ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိတတ်လာပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် လုပ်သွားဖူးတဲ့ ဦးသန့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်လေယူ လေသိမ်းဟာ ဥရောပသံ လုံးဝမ၀ဲပါဘူး။ အမေရိကန်သံလည်း မ၀ဲပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြတ်သား ပီသ ရှင်းလင်းပါတယ်။ တလောကမှ အနားယူသွားတဲ့ ကိုဖီအနန်သည်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ အာဖရိကသံ ၀ဲဝဲကြီးနဲ့ပဲ ပီပီသသကြီး ပြောသွားတာပါပဲ။ ဥရောပသံလည်း မ၀ဲ၊ အမေရိကန်သံလည်း မ၀ဲပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်လို့များ တချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အပီမကျင့်ဘဲ လေသံအ၀ဲကျင့်နေကြလည်းဆိုတာ နားလည်ရ ခက်မိပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျနော့်ကို `မင်းကရော အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လောက် ပြောနိုင်နေပြီမို့လို့လဲ´ လို့မေးလာရင် `ကြိုးစားနေဆဲပါ´ လို့ ဖြေပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် အမေရိကန်သံ မ၀ဲချင်ပါဘူး။ ပီပီသသနဲ့ ကျနော်ပြောချင်တာကို တဖက်သားနားလည်အောင်သာ ကြိုးစားပြောချင်ပါတယ်။
ကျနော့် အမြင်ကတော့ အပြင်မှာ လူချင်းတွေ့နေမှတော့ မြန်မာအချင်းချင်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောနေစရာ လိုမယ်မထင်။ လိုအပ်လို့ ဒေသခံတွေ၊ တခြားနိုင်ငံက လူတွေနဲ့ ပြောတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်စကားကို သုံးရ၊ ပြောရရင်လည်း မြန်မာသံ ၀ဲမှာကို ဘာမှကြောက်နေစရာမလို။
အဲ..။ ဒီစာရေးရင်းနဲ့ ဖုန်းမြည်လာတော့ နားထောင်တာ ဖို့ဝိန်းက သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီက ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်ရမလဲ…။ ငါးပိသံ အပြည့်နဲ့ အားရပါးရ နှုတ်ဆက်ပစ်လိုက်တယ်။
What’s up, mannnnnnn(((((((((
ဟားဟား သိပ်ကောင်းတာပဲ ။ ကျွန်မလည်း အဲလို အမေရိကန် အသံတုကြီးနဲ့ ပြောနေကြတာ သိပ်မုန်းတာပဲ ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေးခဲ့ဖူးသေးတယ်..
ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. ဘလောက်ခ့်စာအုပ်နာမည်လုပ်ဖို့ ကိစ္စ အကူအညီလိုနေလို့ မြန်မာစာကျွမ်းကျင်တဲ့ ကိုကလိုစေထူးကို လာကူညီပါဦး လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။
ကို သွားပြီး register လုပ်ပါ ။
နောက် Forum ခေါင်းစဉ်တွေအောက်.. Go to General->lobby-> creative name for myanmar blogger book
Apr 5, 2007, 12:58:00 AM
After reading this post, I was little hesitate to sendacomment in english. Anyway Just hoping that your post didn't mean to some burmeses who don't know how to type in burmese... loimwethu
Apr 5, 2007, 1:32:00 AM
အဲဒီလိုမျိုးဝဲသံကို အတုယူပြောတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။
အမေရိကန်သမတ ဘွတ်ရ်ှရဲ့ အသံမျိုးလုပ်ပြီး ပြောပြောပြနေလို့ ကျမမှာ ရယ်လိုက်ရတာ။
လေယူလေသိမ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေသ တခုနဲ့တခု မတူကြဘူးနော်။ ဗမာစကားကိုလည်း အထက်အညာ လေယူလေသိမ်းက တမျိုး အောက်ပြည်အောက်ရွာ လေသံကတဖုံ၊ တောင်ပေါ်သားတွေ ပြောပုံက တပုံစံ ကွဲပြားနေကြတာပဲ။
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်တွေ ထဲမှာလဲ နန္ဒာလှိုင်ဝဲ၊ မေသန်းနုဝဲ၊ ထက်ထက်မိုးဦးဝဲ ဆိုပြီး သူ့အ၀ဲနဲ့ သူ ၀ဲနေလိုက်ကြတာ။
သူ့ဒေသနဲ့သူ ၀ဲတာလေးတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းပေမယ့် ပီပီသသ ပြောနိုင်သူတယောက်က တမင်လုပ်ဝဲ နေရင်တော့ နားကြားပြင်းကပ်စရာနော်။
အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့ လေယူလေသိမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး R.P accent (Received Pronunciation) ဆိုတာရှိတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ဘယ်ဒေသက ဘယ်လိုတွေဝဲကြပါစေ တကယ်တမ်း R.P accent နဲ့ ပြောနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျမဆရာမတယောက် ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ် ပြန်ရှာကြည့်ပြီး တွေ့ရင် တင်ပေးပါအုံးမယ်။
Apr 5, 2007, 1:38:00 AM
ဂျစ်တူးရေ.. ကျနော် အဲဒီဖိုရမ်ကို သွားဖတ်ပြီးပါပြီ။ အခုကတော့ အလုပ်သွားချိန်နီးနေလို့ အလုပ်က ပြန်လာရင် ကျနော့်အမြင် တခုခုတော့ ဖြစ်အောင် ရေးပါ့မယ်။
လွယ်မွေသူ... ကျနော်နားလည်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ရိုက်တာက မြန်မာလို မရိုက်တတ်လို့ဘဲဟာနော... ကျနော်ဆိုလိုတာက မြန်မာလို ပြောလို့ရရဲ့သားနဲ့ မြန်မာအချင်းချင်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောသူတွေကိုပါ။
မမေဓာဝီ... အဲဒီဆောင်းပါးကို မြန်မြန်တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျို့။
ဦးသန့် ရဲ့မိန့်ခွန်း နားထောင်ကြည့်ချင်လို့ ၊ ဘယ်မှာများ ရနိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ဦးသန့် ကို ပုံတွေထဲဘဲ တွေ့ ဘူးနေလို့ ၊ တစ်နေရာရာမှာ သူ့ စကားပြောနေတာ ကြည့်ချင်နားထောင်ချင်လို့ ။
Apr 5, 2007, 8:19:00 AM
Sorry bro. I found this from YouTube.
U Thant was speaking.
Apr 5, 2007, 8:53:00 AM
ကိုချို့ ကျေးဇူးကြောင့် ဦးသန့် စကားပြောတာ ကြည့်လိုက်ရပါကြောင်း။
ကောင်းလှောင့်တေး ၊ ကောင်းလှောင့်တေး ။
ကိုချိုက မေးလဲမေး.. ဖြေလဲဖြေ လုပ်သွားရင်း လင့်ခ်ပါပေးသွားတော့ တခြားလူတွေပါ ကြည့်လို့ရသွားတယ်.. ကျနော်ကတော့ ဦးသန့်မိန်ခွန်းပြောတာကို သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီက စီဒီထဲမှာ ကြည့်ရတာပါ။ သူက ဦးသန့်အထုပတ္ထိပုံစံမျိုး ခွေထုတ်မလို့ ကြိုးစားနေတယ်.. အခု ကိုချိုပေးတဲ့လင့်ခ်ကို သူ့ကိုလဲ ပြလိုက်ပါအုံးမယ်။
Apr 5, 2007, 4:48:00 PM
ကိုချိုရေ.. လင့်ခ်အတွက် ကျေးဇူးပဲ ။
ကိုကလိုစေးထူး... အဲဒီ ဦးသန့် အထုပတ္တိထုတ်ရင် ပြောပါဦး ။
Apr 5, 2007, 8:24:00 PM
Apr 5, 2007, 9:04:00 PM
မှန်လိုက်တာ.. ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်အသံကိုပဲ ပီအောင်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်.. အနောက်နိုင်ငံသားတွေက နားလည်ကြပါတယ်..
ကျနော်တို့ရဲ့ mother language မဟုတ်တော့..ကိုယ်ပြောတာသူတို့နားလည်ကြတယ်လေ..
တူအောင် လိုက်တုလို့တော့ ဘယ်ရပါ့မလဲဗျ..
ကျနော်နဲ့ ပတ်သက်ဘူးသူအနောက်နိုင်ငံသားတိုင်း ပြောကြတယ် .. ကိုယ်ပြောတတ်သလိုပြောတဲ့ မှားရင်သူတို့ပြင်ပေးတယ်လေ..
ကျနော်က ရန်ဖြစ်ရင် ပိုသွက်တယ်..ဘယ်ကစကားတွေထွက်လာမှန်းမသိတော့ဘူး
Jan 5, 2008, 12:03:00 AM
Jun 25, 2009, 2:46:00 AM